သရော်စာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 29
Joker TheGeek – လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၁၀၀ ကျော် ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ် တလွဲတချာ်ကွန်မင့်များ
လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၁၀၀ ကျော် ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ် တလွဲတချာ်ကွန်မင့်များ ပျော်တော်ဆက်သာဂိ၊ ဧပြီ ၁၉ ၊ ၂၀၁၂ အကယ်၍များ မြန်မာပြည်မှာ အင်တာနက်ရယ်၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ရယ်သာ ရှိခဲ့ရင် အဲသည်တုန်းက အထင်ကရ၊ အမှတ်တရ ကိစ္စကြီးများကို မျက်မှောက်လက်ရှိ ကွန်မင့်စာဆိုအကျော်အမော်များက ဘယ်လိုများ လက်စွမ်းပြကြလိမ့်မလဲလို့ တွေးနေမိတယ်။ ယခုလ Reader Digest ပေါ်က Five Stupid Internet Reactions ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးကို ဖတ်မိရာက တွေးမိတာပါ။ အွန်လိုင်းသတင်းတွေမှာ ကွန်မင့်ပေးခွင့်ပေးထားတော့ နှမ်းဝင်ဖြူးကြသူ ကွန်မင့်အကျော်အမော်တွေရဲ့ လက်သံပြောင်မှုတွေကိုသာ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၁၀၀ နောက်ဆုတ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုများ ကမ္ဘာအထင်ကရအရေးအခင်းတွေကို လက်စွမ်းပြကြမယ် မသိဖူးလို့ စာရေးသူက ပြန်တွေးပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။...
၂၀၁၂ မိုးမခသင်္ကြန်သံချပ် ဂျော်ဒီး၊ ဧပြီ ၉ ၊ ၂၀၁၂ (Illustation – old cartoons from moemaka) ၂၀၁၂ သင်္ကြန်အခါ.. (အတာရေ နဲ့ ဆေးကြကြောကြ..) သိကြားမင်းကြီး လူ့ ပြည်လာ..(အတာကြပ်တာ ..လက်ပ်တော့ကြီးနဲ့ ) သိကြားမင်းကြီး လက်ပ်တော့ ကိုင်….(.အင်တာနက်ဆိုင် မှာ…. မီးစက်ကိုနှိုး) လိပ်ဖိုးဖိုးရဲ့ကိုးနတ်ရှင်….(သိကြားမင်းကိုတောင် အရေးမစိုက်) ရွှေပုရပိုဒ် နဲ့ခွေးသားရေ..သာ..….(ရှေးဟောင်း အစဉ်အလာ… ပြန်ကာသုံးရ..)။ ၂၀၁၂ သင်္ကြန်အခါ..တို့ ပြည်မြန်မာ ..(ဘာတွေထူးသတုံး) ဖုန်းလိုင်းတွေက မကြည်လင်……(၂သိန်းတန်တောင် ရောင်းချင်သေးသတဲ့ ) တို့ ပြည်သူများတောင်းဆိုတာ…(၅၀၀၀တန် ဖုန်းပါ ..လူအများသုံးဖို့ ) ၅၀၀၀တန် ဖုန်း...
Edo ၏ ဖန်တီးချက် မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.
(ရှေးမြန်မာမိုးမခမင်းများ အဆက်ဆက်လက်ထက်ကတည်းက မိုးမခပညာရှိများ ညှိနှိုင်းတွက်ချက်တော်မူသောမူအရ ဆရာမကြီးဂျော်ဒီး စီစဉ်တွက်ချက်ထားသည့် မိုးမခ မဟာသင်္ကြန်စာ) မတ်လ ၂၈၊ ၂၀၁၂ ၁၃၇၃ ခု၊ အတိတ်သာသနာတော်နှစ် (၂၅၅၅) ၁၃၇၄ ခု၊ သာသနာတော်နှစ် (၂၅၅၆) ● မဟာသင်္ကြန်ကျချိန် ။ ။ ကြိုတင်မဲပိုး ..မဲခိုး၊ မဲမသမာ အဖြာဖြာနည်းလမ်းကြိုးပမ်းသော်လည်း မရှုမလှ အရှက်ရကာ၊ နိုင်ငံတကာ၊..မီဒီ ယာနဲ့ပြည်သူအများမှ အကြားမလပ်စောင့်ကြပ်ဖော်ထုပ်ကြရသော ဘိုင်အီလက်ရှင်အပြီး တဆယ့်နှစ်ရက်ကြီးအကြာ မြန်မာစံတော်ချိန် ညစက် (၉) နာရီ၊(၅၃) မိနစ်၊ (၂၆) စက္ကန့်။ ● ဇေယျတု သဗမင်္ဂလံ ။ ။ အချင်းယူဇနာ အ၀န်းယူဇနာဘဇာမသိ၊ အိမ်နီးချင်းဆိုးများဧ။် တအိအိဖိခြင်းကိုခံနေရရှာသော ဧရာဝတီ၊ ချင်း...
ဥက္ကာကိုကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၂ (၁) အိုဘားမားသည် ၎င်းနေထိုင်သမှုပြုရာ ထုံးဖြူသုတ်ထားသည့် အိမ်ဟောင်းကြီးရှေ့တွင် “အိုတီး-(O-Tea)” အမည်ရှိ လက်ဖက်ရည် ဆိုင်တစ်ခုကို ဖွင့်လှစ်လိုက်သည်။ အဆိုပါ အိုတီးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်အား သူ၏မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများ၏ ၀ိုင်းဝန်းတိုက်တွန်း လှုံ့ဆော်မှု ကြောင့် ဖွင့်လှစ်ဖြစ်ခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ (၂) ထိုအချိန်က မြန်မာဟူသည့် လူညိုများနေထိုင်ရာ အရှေ့ပိုင်းရွာငယ်လေးတစ်ခုတွင် “လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ယဉ်ကျေးမှု” ဆိုသော ယဉ်ကျေး မှုတစ်ရပ် အတော်အတန်ကြီးမားထွန်းကားလျှက်ရှိလေသည်။ ယင်းရွာငယ်လေးရှိ ရွာသူရွာသားအတော်များများမှာ နာရီ၊ စက္ကန့်၊ မိနစ်များစွာကို လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များထဲတွင် တမ်းတမ်းစွဲစွဲ ပြွတ်ပြွတ်သိပ်သိပ် အချိန်ပေးထိုင်တတ်ကြကြောင်း သတင်းများကြား ရစဉ်က အိုဘားမားကြီးတစ်ယောက် အံ့အားကြီးစွာဖြစ်ရလေ၏။ “အချိန်သည်ငွေ”ဟူ၍ သူတို့အနောက်ပိုင်းရွာသားများ အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးစားလှုပ်ရှား၍ ငွေရရှိအောင် အချိန်ကိုပေးဆပ်နေကြရသည့် ကာလတွင် မြန်မာလူညိုများမှာကား ငွေများပစ်ပေး၍ပင် အချိန်ကို...
ကိုဇာဂနဖတ်ဖို့ ဟာသ ပျော်တော်ဆက်သာဂိ ရန်သူကို မိတ်ဆွေဖွဲ့ကြပါ … မေ ၂၀၊ ၂၀၁၀ ကိုဇာဂနာရေ ခင်ဗျား မဖတ်ရမယ့် စာတွေရေးပြန်ပေါ့။ ကျနော့်ကို မေးကြတယ်ဗျ။ ကိုဇာဂနာနဲ့ ကျနော်နဲ့က နှစ်ပေါင်းများစွာ (ခင်ဗျားက အသက်အလွန်ကြီးပြီး၊ ကျနော်က အလွန်ငယ်တယ်ဗျာ) ကွာတယ်။ မိုင်ပေါင်းများစွာ ဝေးတယ် (ကျနော်က ရန်ကုန်မှာ၊ ခင်ဗျားက မြစ်ကြီးနား)။ ပြီးတော့ ငယ်ပေါင်း ကြီးဖော်ကြီး ကျနေတာပဲ ပြောဆိုနေလိုက်တာ။ ခင်ဗျား မိဘတွေ၊ မိသားစုတွေနဲ့လည်း သိကျွမ်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့ ဘာကြောင့် ဒီလိုမျိုး စာတွေ နင်ပဲ ငဆ ရေးနေတာလဲလို့ မျက်မှောက်ကြုတ်ကြတယ်ဗျ။ ကျနော်ကတော့ ဖြေသာအောင်ပဲ ဖြေပါတယ်။ အကိုဇာဂနာဆိုတာ ပြည်သူ့အချစ်တော်၊ ပြည်သူ့သူရဲကောင်း၊ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်...
အောင်ငြိမ်းချမ်း၊ ဝင်းနန္ဒာ/Myanmar Now ● ဘုန်းကြီးကျောင်း ငရဲခန်းမှာ လပေါင်းများစွာ https://t.co/TugPveIht3 https://t.co/tBsewScZmI about 35 minutes ago ReplyRetweetFavorite
မေငြိမ်း ● မိဘနဲ့ သားသမီးဆိုတာ https://t.co/EUR3M6iPBr https://t.co/CDoTPQsrvf about 55 minutes ago ReplyRetweetFavorite
ကာတွန်း ညီပုချေရဲ့ လေထဲပျောက်ကုန်ပါဦးမယ်ကွာ …. https://t.co/IWZbG6zJ5u https://t.co/K3VZ0Mz8y9 about4hours ago ReplyRetweetFavorite